Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Maninona no mandeha any Hawaii izao? Mitsidika fotoana hafa!
Associations News • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Tsy misy antony tokony hivezivezena any Hawaii izao dia ny hafatra tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny governora Ige androany. Namandrika ny fialan-tsasatra tany Hawaii ve ianao? Mety te handinika haingana ianao. ny Aloha Miatrika rivodoza amin'ny tranga COVID-19 vaovao ny fanjakana ary mety tsy vonona hiatrika izay ho avy izy ireo. Androany no andro firaketana an-tsoratra an'ireo tranga areti-mandringana vaovao. Ny toro-hevitra tsara indrindra avy amin'i Dr. Char, Talen'ny Departemantan'ny Fahasalamana any Hawaii, dia ny MIJANO TRANO!
Elizabeth A. Char, MD, nandray ny fitantanana ny Departemantan'ny fahasalamana Hawai'i tamin'ny 16 septambra 2020, rehefa notendren'ny Governemanta Hawaii David Ige.
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany niaraka tamin'ny governoran'i Hawaii Ige, dia nanentana ny vahoaka tao Hawaii sy ireo mpitsidika izy mba hijanona ao an-trano fa tsy handeha amin'izao fotoana izao.
Androany, 1,167 XNUMX ny aretina fanampiny ao amin'ny State of Hawaii, mihoatra ny avo roa heny amin'ny isa avo indrindra voarakitra hatramin'ny nipoiran'ny viriosy.
Tsy hiova ny fiparitahan'ny viriosy raha tsy miova isika, hoy i Elizabeth Char iray izay natahotra be tamin'ny mpanao gazety tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety natolotry ny governoran'i Hawaii Ige androany maraina.
Ao amin'ny tatitra COVID-19 farany avy amin'ny Governemanta ny Aloha State, misy 1,167 tranga COVID vaovao, mitondra ny totalin'ny tranga hatramin'ny 49,564. Amin'ireo 2,971 dia takiana hopitaly.
Raha mbola misy ny toeran'ny hopitaly, ny vokadratsin'ny fihanaky ny vondrom-piarahamonina ny karazana COVID-19 Delta dia miala aina tsy ho an'ny marary ihany fa ho an'ny olona rehetra ao amin'ny fiarahamonina.
Rehefa nampitandrina ity boky ity mpitsidika izay misy fameperana vaovao Hijery ny bika rehetran'ity matoanteny ity eo amin'ny Raki-bolana Volapoky eto amin'i Wikibolana.
Azafady mba ataovy ny tsara ary mandehana any Hawaii amin'ny fotoana hafa!
eTurboNews mpamaky, Ramatoa J, nandefa hevitra tamin'ity famoahana ity nilaza hoe:
Tsy hanome soso-kevitra ny hahatongavako any Hawaii amin'izao fotoana izao. Na inona na inona fameperana misy eto mandritra ny 2 herinandro, tena maniry ho sendra vonjy taitra ara-pitsaboana ve ianao ary manantena fa hisy mpitsabo mpanampy na dokotera mahantra miasa amin'ny fihodinanan'izy ireo na telo sosona mba hanana fotoana hanomezana fitsaboana sahaza anao?
Hipoka hatrany ny toe-javatra rehefa manana isa mpizahatany avo isika. Mety ho fanamby tokoa ny fidirana amin'ny trano fisakafoanana avela hipetrahan'ny 50 isan-jato.
Ny mponina dia mety hihetsika tsara na tsy hanao tsara ny tarehinao fa rehefa ampidirina hopitaly ny zanakay dia tsy mila anao handray ny loharanom-pahasalamanao eto ny ankamaroan'ny ankamaroantsika.
Fantatro fa voaloa ny dianao, fa ny ankamaroan'ny kaompaniam-pitaterana dia miovaova ankehitriny ary farafaharatsiny vonona hanome anao ny trosa amin'ny ho avy. Raha ny momba ny trano fonenanao dia azonao atao ny manazava fa manandrana manao ny tsara ianao amin'ny tsy faniriana handoa hetra ny loharanon-tsika sy hahita izay mitranga.
Azafady mba ataovy izay mety ary tonga amin'ny fotoana hafa.
Diso izany ny governora Ige rehefa nilaza izy fa tsy mbola eo am-pelatanana ny famerenana fameperana bebe kokoa. Raha ny fahitana azy dia laharam-pahamehana ny antony ara-toekarena, toy ny any Florida, Texas, Louisiana, ary fanjakana maro any Etazonia.
Amin'izao fotoana izao, ny 77.98% amin'ireo kaontinanta amerikana, izay totalin'ny faritany 2,511, dia mirakitra ny isa avo indrindra sy ny isan-jaton'ny fihanaky ny vondrom-piarahamonina amin'ity virus mahafaty ity, miaraka amin'ny tranga vaovao maherin'ny 10% isaky ny mponina 100,000 XNUMX.
Betsaka ny milaza fa tsy afaka mikatona intsony ny toekarem-pizahantany i Hawaii. Na dia misy aza ny famerana eo amin'ny toerany dia mitafy saron-tava, 50% ny haavon'ny trano fisakafoanana ao amin'ny trano fisakafoanana ary fetra ho an'ny magazay - misy an'ohatra fotsiny izany rehetra izany. Tamin'ny taon-dasa, fitomboan'ny tranga COVID 100 isan'andro fotsiny no niteraka ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny fanjakana manontolo ary mihidy tanteraka ny trano fandraisam-bahiny sy fivarotana ary trano fisakafoanana.
Toy ny mahazatra hatrany, ny Hawaii fizahan-tany fizahan-tany mangina ary tsy mamaly ny olom-pirenena, ny mpitsidika ary ny mpanao gazety. Tranga vaovao 1,167 XNUMX androany no mihoatra ny andalana mena ho an'ny mponina, fa iza no mihaino?
61.2% amin'ny totalin'ny vahoaka no vita vaksinina feno. Ny totalin'ireo tranga voalaza tato anatin'ny 14 andro dia 7,327. Ny isan'ny maty hatreto dia 547.
Miomana amin'ny rivodoza isika amin'izao tranga COVID izao, hoy ny Governoran'i Hawaii androany. Fantatra amin'ny maha governora azy milamina foana izy, hita miharihary fa nihovotrovotra izy tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany.
Ho valin'ny reporter AP, ny governemanta dia nilaza fa ny 2% fotsiny amin'ireo tranga vaovao dia eo amin'ireo mpitsidika. Ireo mpitsidika dia tsy maintsy manana fitsapana ratsy na taratasy fanaovana vaksiny.
Ireo izay manana taratasy fanaovana vaksiny dia mety miabo sy areti-mifindra, saingy tsy ho fantatra izany.
Nilaza ny Governora fa ny loza mitatao dia ny fihanaky ny fiarahamonina amin'ny virus. Ny olona iray dia afaka manome izany ho an'ny 1,000 hafa. Ny Governora sy ny talen'ny fahasalamana ho an'ny fanjakana dia mino fa ao amin'ny fiarahamonina ny viriosy, fa ny tsy fanekena ny mpizahatany dia ao anatin'ny vondrom-piarahamonina iray ihany.
Ao amin'ny tontolony manokana, mino ny mpitondra Hawaii fa matetika ny mpizahatany no mizaka ny faritra misy azy ireo any amin'ireo nosy, trano fisakafoanana sy torapasika matetika. Tena tsy manam-pahalalana sy lavitra ny fahamarinana izany. Amin'ny nosy kely toa an'i Hawaii dia mifangaro amin'ny olona rehetra ny mpizaha tany, na aiza na aiza toerana, ary i Waikiki na i Lahaina dia tsy faritra mitokana.
Nahitsy i Dr. Char raha nilaza fa tsy misy antony tokony hitetezan'ny olona amin'izao fotoana izao. Hoy koa izy: “Tsy fantatrao mihitsy hoe iza no hipetrahanao eo ambony fiaramanidina.”
Miatrika fameperana fitsangatsanganana vaovao ho an'i Hawaii ireo mpitsidika.
Mitandrema rehefa any Hawaii!
Juergen T Steinmetz hoy:
13 Aogositra 2021 amin'ny 20:50
Mahalo Ingrid amin'ny valinteninao tsara. Misaotra namaky anay. Miahiahy isika rehetra. Nifindra teto aho tamin'ny 1988 ary niasa tamin'ny sehatry ny fizahan-tany hatramin'ny 1976.
Maharary ahy ny milaza fa tsy maintsy mijanona ny fizahantany! Saingy mandra-pahazoantsika tena fitantanana an'ity olana tsy voatanisa ity.
Mampalahelo fa tsy misy làlana mazava eto amin'ity fanjakana ity, ary ny mpitondra fizahan-tany (HTA manokana) dia nangina isaky ny nanomboka ny COVID-19.
Ingrid Peterson hoy:
13 Aogositra 2021 amin'ny 20:36
Misaotra betsaka anao nandefa ity hafatra ity! (Avy amin'ny mponina nifindra teto fony mbola zaza tamin'ny 1963.)
13 Aogositra 2021 amin'ny 20:35